Kitra : handrasana etsy Mahamasina ny nofo mangatsiakan’i Gôly Be | NewsMada
Kitra : handrasana etsy Mahamasina ny nofo mangatsiakan’i Gôly Be
Efa ofisialy fa higadona eto Madagasikara, amin’ny alahady 24 janoary ho avy izao, amin’ny 10 ora latsaka fahefany ny nofo mangatsiakan-dRafalimanana Ferdinand (Gôly Be), hotronin’ny vady aman-janany. Io no nambaran-dRafalimanana Stellah, zanaka vaviny, teny 67ha, omaly, izay efa tonga mialoha hanomana sy hikarakara ny fandevenana azy any Mandritsara. Ho feno ny fandaharam-potoana, satria handrasana etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ny razana, ny andron’io alahady io ary azon’ny rehetra tsidihina. Hihazo an’i Mahajanga ny alatsinainy ary mbola hisy ny fiandrasana azy any an-toerana. Hanainga ary hamonjy ny fasan-drazany any Mandritsara, ny talata 26 janoary, hanaovana ny fandevenana.
Nambaran’i Stellah, fa tsy nanana ny hoenti-manana izy ireo fa noho ny fanampian’ireo mpanao baolina fahiny sy ireo namana tsotra, na teto Madagasikara na tatsy La Réunion na ny tany Frantsa, dia feno ny fepetra hampodiana ny razana.
Ankoatra izay, natolotry ny fikambanan’ireo mpilalao fahiny tao amin’ny ekipam-pirenena (Club M, Scorpions, Barea de Madagascar), tamin’ny alalan’i Angelo Fernand, filoha lefitra, ho an’ny fianakaviany ny vola mitentina 4 036 900 Ar , voangona tamin’ny tsipaipaika natao tetsy Andohan’Analakely sy ny azo tamin’ny rindran-kira ary ireo nalefan’ny mpankafy tamin’ny Mvola.